Haweenka Turkiga ee katirsan ciidamada oo loo ogolaaday xirashada xijaabka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldHaweenka Turkiga ee katirsan ciidamada oo loo ogolaaday xirashada xijaabka
February 22, 2017 Puntland Mirror World 0
Haweenka Turkiga ee katirsan ciidamada oo loo ogolaaday xirashada xijaabka. [Sawirka: Archive]
Ankara-(Puntland Mirror) Haweenka Turkiga ee katirsan ciidamada ayaa loo ogolaanayaa in ay xirtaan xijaabka markii ugu horeysay, sida lagu sheegay xeer kasoo baxay wasaaradda gaashaandhiga dalka Turkiga maanta oo Arbaco ah.
Xeerka cusub ee ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga ayaa u ogolaanaya haweenka askarta ah in ay xijaabka ka hoos xiran karaan koofiyadahooda iyo dharkooda waa haddii ay isku midab yihiin.
Xisbiga talada haya (AKP) oo uu wax ka asaasay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ay asal u tahay diinta suuban ee Islaamka ayaa muddo dadaal ugu jiray sidii xanibaada looga qaadi lahaa in haweenku ay xirtaan xijaabka, taasoo horey mamnuuc uga ahayd Turkiga.
Berlin-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa noqotay dalka ugu masuqmaasuqa badan caalamka, sida haayada Transparency International ay ku sheegtay Tusmeyn Garashadeeda Musuqmaasuqa ee 2017, oo ay sii deysay xalay oo Arbaco ahayd. Tusmeynta sanadlaha ah ee Transparency [...]